Apple inotangisa iOS 14.5.1 kugadzirisa dambudziko neApp Tracking Transparency | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 03/05/2021 19:49 | iOS 14, Noticias
Vhiki rapfuura Apple yakaunza mhando yayo nyowani yezvigadzirwa zvitsva, kusanganisira AirTag kana iyo iMac nyowani uye inogadziriswazve. Iyo vhezheni yakavambwawo zviri pamutemo uye yevashandisi vese iOS 14.5, iyo yanga iri mubeta kwemwedzi yakati wandei. Nhau huru dzakauya neiyi vhezheni senge mukana wekuvhura iyo iPhone neApple Watch kana kusvika kweApp Tracking Transparency system. Kwapera vhiki, iOS 14.5.1 yakaburitswa nekushamisika, neiri nani pane inoenderana neyakavanzika nzira yeiyo Big Apple iyo yakapa vazhinji vashandisi matambudziko.
iOS 14.5.1 inosunungurwa nekushamisika pamwe nekuvandudzwa muApp Tracking Transparency
Ichi chigadziriso chinogadzirisa nyaya neApp Tracking Transparency uko vamwe vashandisi vakamboremadza sarudzo, vangangotambira notices kubva kumaapps mushure mekuigonesa zvakare. Iyi yekuvandudza zvakare inopa yakakosha yekuchengetedza ekuvandudzwa uye inokurudzirwa kune vese vashandisi.
Sezvo isu tanga tichiverenga kubva pakutanga kwechinyorwa, Apple yakafunga kuvhura iOS 14.5.1 yeIOS 14 zvishandiso zvinoenderana uye zvakare iOS 12.5.3 yeaya madhizaina aisakwanisa kuisa idzva shanduro. Vaviri vanogovana kugadzirisa mukuchengetedza system uye kuita kwechigadzirwa.
Izvo kuuya kweIOS 14.5 kunoreva kumushandisi
Uye zvakare, iOS 14.5.1 inosvitsa mhinduro kubug yakanangana neApp Tracking Transparency system, sisitimu nyowani iyo inobvumidza mushandisi kubata kuti ndeapi maapplication anotendera vashandisi uye yavo data kuteverwa. Nekudaro, vashandisi vazhinji vakatadza kumisikidza iyo system kana vangozviremadza kekutanga. Izvi zvakagadziriswa muIOS 14.5.1.
Iyo vhezheni yave kuwanikwa uye inogona kuvandudzwa kuburikidza nechishandiso pachacho uchishandisa Wi-Fi inogadziridza o kubudikidza iTunes. Apple inokurudzira kuisa iyo yekuvandudza yevashandisi vese pane zvese zvavanoshandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple inoburitsa iOS 14.5.1 kugadzirisa dambudziko neApp Tracking Transparency
12,9-inch iPad Pros inoregedza kutumira kwaJune 17-30